Rektaangiloota kamshaa Maammiloo fayyadamuun, Kamshaa Rektaangiloota ida'uu ni dandeessa.
Karaa Xiyyoolee Uumuu
Bakka galmee ammee keessatti harkistutti rektaangilii guutuu kaasa,Mogee rektaangilii bakka qabachiisuu barbaadeetti harkisi. Rog - arfee kaasuudhaaf jijjirraa qabiti harkisii.
Rektaangilii geengoo guutuu waliin kaasuun galmee ammee keessatti iddoo harkistuutti barbaaddetti cuqaasi. Reektaangilii kaasuuf, Shift gadi dhiibi yommuu harkistu.
Rektaangilii geengoo guutuu waliin kaasuun galmee ammee keessatti. Xiyyoo iddoo reektangilii marfamaa itti olkeessu cuqaasi fi hamamtaa barbaadde harkisi. Rog-afree marfamaa kaasuuf, Shift gadi dhiibi yommuu harkistu.
Rog-arfee marfamaa guutuu waliin galme ammee keessatti garamitti akka harkistuu kaasa.Bakka Xiyyoo,rog-arfee mudundulaa olkaa'uu barbaaddetti. cuqaasi,hammamtaabarbaaddetti harkisi. Rektaangilii mudundulaa kaasuuf,Jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Rektaangilii, Hin guutamne
Rektaangilii duwwaa bakka galmee ammee keessatti harkistu kaasa xiyyoo rektaangilii bakka kaa'uu barbaaddetti cuqaasi; hammamtaa barbaaddetti harkisi. Rog-arfee kaasuuf,Jijjiirraa gaq qabi wayita harkistu.
Rog-arfee, Hin guutamne
Rog-arfee duwwaa bakka galmee amme keessatti harkistu kaasa. Xiyyoo rog-arfee bakka kaa'uu barbaaddetti cuqaasi;hammamtaa barbaaddetti harkisi.Rektaangilii kaasuuf,Jijjiiraa gaqqabi wayita harkistu.
Rektaangilii Mudundulaa, Hin guutamne
Rektaangilii mudundulaa duwwaa bakka galmee ammee keessatti harkistu kaasta Xiyyoo mudundula rektaangilii bakka kaa'uu barbaaddetti cuqaasi;hammamtaa barbaaddetti harkisi.Rog-arfee mudundulaa kaasuuf,jijjiirraa gaq qabi wayita harkistu.
Rog-arfee Mudundulaa, Hin guutamne
Rog-arfee mudundula duwwaa bakka galmee ammee keessatti harkistu kaasa.Xiyyoo mudundulaa rog-arfee bakka kaa'uu barbaaddetti cuqaasi;hammamta barbaaddetti harkisi.Rektaangilii mudundulaa kaasuuf Jijjiirraa qabi wayita harkistu.
Title is: Rektaangiloota